Xildhiban Publications;- 12 March 2013. Kulankii Qoreyaasha Soomaaliyeed oo lagu soo gebagabeeyay magaalooyinka Helsinki, Turku ee dalka Finland.
Waxaa 3dii maalmood ee ugu dambeysay ee toddobaadkan ka socday magaalooyinka Helsinki, Turku & Pasila ee dalka Finland kulankii qoreyaasha Soomaaliyeed ee sanadkiiba mar lagu qaban jiray dalkaasi, waxaana sanadkan ka soo qeybgalay qoreyaal ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Talyaaniga & Canada.
Qoreyaashii sanadkan ka soo qeybgalay waxaa ka mid ahaa:-
1. Prof. Cabdalle Cumar Mansoor,
2. Dr. C/qaadir Cali Boolaay
3. Dr. C/salaam Xaaji Max’ed
4. Max’ed Sheikh Xassan
5. C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban"
6. Bashiir Ismaaciil Cusmaan
Waxaa maanta ka furmay magaalada Helsinki ee dalka Finland carwo buugeedkii sanadkii 9aad. Kulankan waa bandhigga ugu weyn uguna fac weyn ee ka dhaca qaaradda Europe. Bandhiggan waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiya shirkadda daabacaadda buugaagta ee Scansom Publishers & maktabadda magaalada Helsinki.
Sidoo kale waxaa isna hadal soo dhaweyn & mahadnaq ballaaran ka jeediyay goobtaasi Xildhibaan C/raxmaan Max'ud Cali "JIIMI" oo mudane laga soo doortay deegaanka Espoo, ahna qabanqaabiyeyaasha joogtada ah ee barnaamijkan.
Dhinaca kale waxaa xusid mudan in kulankani ay gacan ka geysteen ururrada kala ah:-
Finland - Somalia association, Helina Ruatavaara Museum & Pasila Islamic Centre, Masaajidyada kala ah Itakuskus & ururka midnimada Soomaaliyeed ee Somalilitto.
Haddaba muddadii uu socday kulankan waxaa ugu horreyn hadallo qiimo badan ka soo jeediyay Prof. Cabdalla Cumar Mansoor oo isugu ku dheeraaday qiimaha afka Soomaaliga & halgankii dheeraa ee loo soo maray & waajibaadka ruux walba oo Soomaali ah ka saaran horrumarinta & horay u dhiggiisa.
Dhinaca waxaa isna halkaasi ka hadlay Dr. C/qaadir Cali Boolaay halgankii dheeraa ee ummadda Soomaaliyeed u soo martay waxa dadka Soomaaliyeed ay ku faanaan ee AFKA Soomaaliga, Af Soomaaliguna uu yahay wax aka haray burburkii dowladnimo eek a dhacay dalkeena Soomaaliya.
Ugu dambeyntii waxaa iyagana hadallo aad u qiimo badan halkaasi ka soo jeediyay Max’ed Sheikh Xassan Nuur oo ah madaxa shirkadda daabacaadda buugaagta Soomaaliyeed ee Scansom Publishers, Qoraaga Soomaaliyeed C/casiis Cali Ibrahim "Xildhiban" & Dr. C/salaam Xaaji Max’ed oo dadkii Soomaaliyeed ee ka qeybgalay kulannadaasi ku dhiirigaliyay ka qeybgalka howlaha lagu horrumarinayo dhammaan dadaallada is biirsaday ee ay hormuudka ka yihiin Qoreyaasha Soomaaliyeed.
Xildhiban Publications, Helsinki